एकै दिन पर्छ रोनाल्डो र नेयमारको जन्मदिन, मेस्सीको जन्मदिन विश्वकपको बीचमा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एकै दिन पर्छ रोनाल्डो र नेयमारको जन्मदिन, मेस्सीको जन्मदिन विश्वकपको बीचमा
मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १४:११ मा प्रकाशित !
एजेन्सी। विश्वकप फुटबल सुरु हुनै लाग्दा फुटबल जगतका तीन स्टार फुटबलरको जन्मदिनको रोचक संयोगले अहिले चर्चा पाएको छ । स्टार फुटबलरहरु लियोनेल मेस्सी, क्रिष्टियानो रोनाल्डो र नेयमार जुनियरको जन्मदिनको रोचक संयोगले चर्चा पाएको हो ।
अर्जेन्टिनी स्टार लियोनेल मेस्सीको जन्मदिन यस वर्ष विश्वकपको बीचमा परेको छ । अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सीले विश्वकप खेल्दै गर्दा आफ्नो जन्मदिन मनाउनेछन् । २४ जून १९८७ मा जन्मिएका मेस्सी विश्वकप चलिरहँदा ३१ वर्ष पुग्नेछन् ।
पोर्चुगिज स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डो र ब्राजिलियन स्टार नेयमार जुनियरको जन्मदिन भने एकै दिन पर्छ । रोनाल्डो ५ फेब्रुअरी १९८५ मा जन्मिएका हुन् । रोनाल्डो अहिले ३३ वर्षका छन् । ब्राजिलियन स्टार नेयमार जुनियर पनि ५ फेब्रुअरीकै दिन जन्मदिन मनाउँछन् । उनी ५ फेब्रुअरी १९९२ मा जन्मिएका हुन् र अहिले उनी २६ वर्षका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: प्रशासनलार्इ आयोजना प्रमुखकै असहयाेग
NEXT POST Next post: सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तहरु गोरे, भुजुङ र छिरिङ वाङगेलको सम्पत्ति अनुसन्धान सुरु
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १४:११
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १४:११
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १४:११
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १४:११
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ २९, २०७५ १४:११